Sergio Ramos oo baxar dhexda ka taagan kadib markii uu Qirtay in uu Si Ula Kac Ah U Qaatay Kaadhkii Digniinta Ahaa Ee Kulankii Ajax – Somali Mail
Home Champions League Sergio Ramos oo baxar dhexda ka taagan kadib markii uu Qirtay in uu Si Ula Kac Ah U Qaatay Kaadhkii Digniinta Ahaa Ee Kulankii Ajax
Sergio Ramos oo baxar dhexda ka taagan kadib markii uu Qirtay in uu Si Ula Kac Ah U Qaatay Kaadhkii Digniinta Ahaa Ee Kulankii Ajax
Somali Mail February 14, 2019
Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa biyo kulul iskugu dhex riday hadal uu sheegay kadib guushii ay kooxdiisa Madrid ka soo gaadhay Ajax ee lugtii hore ee Champions league wuxuuna Ramos qirtay in uu isagu sabab dhab ah u ahaa in uu qaatay kaadhkii digniinta ahaa kaas oo uu ku seegi doono kulanka lugta labaad ee Champions league ee ay Madrid soo dhawayn doonto kooxda Ajax.
Ujeedada Sergio Ramos ayaa ahayd in uu kooxdiisa ka maqnaado kulanka lugta labaad ee Bernabeu ee ay Ajax la ciyaari doonaan maadaama oo uu ka walwalsanaa in kulanka lugta labaad uu kaadhka digniinta ah qaato oo uu seegi lahaa kulanka lugta kowaad ee siddeed dhamaadka haddii ay kooxdiisu soo gudubto.
Sergio Ramos ayaa dhamaadkii kulankii Ajax waxa uu qalad ku galay gool dhaliyaha kooxda Ajax ee Kasper Dolberg laakiin in uu qirtay in uu si ula kac ah qaladkan u seemayay si kaadka digniinta ah loo siiyo ayaa keen karta in UEFA ay ganaax laba kulan ah ku rido maadaama oo aanu sharciga UEFA ogolayn in ciyaartoy uu go’aansado waqtiga uu ganaax ku maqnaanayo.
Sergio Ramos oo qirinaya in uu qalad ula kac ah ku galay Kasper Dolberg si kaadhka digniinta ah ee kulankii Ajax loo siiyo ayaa yidhi: ” Been ayaan sheegayaa haddii aan idiin sheego in aanan kaadhka qasab ka dhigin. Waxa uu ahaa wax maskaxdayda ku jiray, ma aha in aan la yaraysanayo (Ajax) ama in laga fikirayo in haddaba kulan uu dhamaaday, laakiin aniga ayaa go’aansaday (in kaadhka aan qaato), sidaa daraadeed, waxaan nasan karaa kulanka soo laabashada, inkasta oo aan garoonka iman doono si aan kooxda u dhiiro galiyo”.
Hadlka Sergio Ramos ayaa keenaya in UEFA ay arintan baadho waxayna haddaba qaar warbaahinta ka mid ahi sheegayaan in kabtanka Madrid uu hadalkan ku mutaysan karo ganaax laba kulan ah.
Dhinaca kale Sergio Ramos ayaa amaanay muuqaal caawiyaha garsoorka VAR kadib markii uu kooxdiisa ka caawiyay in Ajax laga diiday goolkii furitaanka wuxuuna yidhi: “Marar badan ayaan sheegay in anigu aan ahay difaacaha VAR, sababto ah waxa uu si qunyar-qun yar ah u caawin doonaa cadaalada kubbada cagta”.
Ugu danbayn Ramos ayaa ka hadlay imtixaankii ay Ajax kaga soo gudbiyeen iyo markan ay Ajax dhibaato ku mari doonto Bernabeu wuxuuna yidhi: “Waxaanu naqaanaa sida loo dhibtoodo, kulanka ayaanu akhrinay, waxaanu iyaga ku abuurnay banaano si aanu uga faa’iidaysano xawaarahayaga, natiijo fiican ayaanu soo gaadhnay, hadda iyaga ayay u taalaa in ay garoonkayaga ku dhibtoodaan”.
Previous article Donald Trump oo Ilhaan Omar ugu baaqay in ay is casisho
Next article Maari 2 AF SOMALI
Madaxwayne Axmed Madoobe oo Mar kale loo doortay Xilka Madaxweynanimo ee Jubbaland
Xildhibaanada Baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa u doortay Axmed Mado…